कोरोनाको कुन भ्याक्सिनले कति कम गर्छ ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
कोरोनाको कुन भ्याक्सिनले कति कम गर्छ ?
कोरोना भाइरसविरुद्ध बनेका विभिन्न देशका भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिएको छ। आपतकालिन प्रयोगका लागि ति भ्याक्सिन प्रयोगको अनुमति पाएसँगै लगाउन सुरु गरिएको हो।
भ्याक्सिनको प्रभावकारिता कुनैको कम र कुनैको धेरै हुन्छ। जस्तो फ्लूका भ्याक्सिन कम प्रभावकारी हुने गर्छन्।
कोरोनाविरुद्ध अनुमति पाएका फाइजर/वायोनटेक अमेरिकाका भ्याक्सिनले ९५ प्रतिशत, मोर्डानले बनाएको भ्याक्सिनले ९४.५ प्रतिशत काम गर्ने जनाइएको छ।
यस्तै रुसले निर्माण गरेको स्पुतनिक भी ले ९२ प्रतिशत काम गर्ने देखिएको छ। सिनोफार्म चीनको भ्याक्सिनले ७९.३ प्रतिशत, अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले बनाएको भ्याक्सिनले ७०.४ प्रतिशत काम गर्ने जनाइएको छ।
प्रकाशित: १९ पुस २०७७ १७:४६ आइतबार